Vaovao - 2020 dia taona mahavokatra ho an'ny Stamina, tsara vintana
Vita ara-potoana ny tetikasa lehibe avy any Aostralia, manao ny asan'ny fivondronan'izy ireo izao ny mpanjifanay. Nanangana tetik'asa vaovao mitovy amintsika izy ireo, tsy isalasalana, andro vitsivitsy lasa izay, tsy miresaka resaka ara-teknika amintsika akory izy ireo fa manipy anay ireo sary fotsiny. Amponga ihany koa io, fa vovo-by lava, lava kokoa. Ny injenierantsika dia mbola manao fanadihadiana lalina momba ny sary, rehefa manao izany izy ireo dia mila manadino ireo tetikasa taloha rehetra, mba hialana amin'ny olana mety hitranga na hiaina traikefa. Rehefa avy nifanakalo hevitra momba ny sampana havana rehetra izahay dia manapa-kevitra ny hamita ity tetikasa ity ao anatin'ny roa volana.
Mandritra izany fotoana izany, ny vokatra hafa ho an'ny mpanjifa Alemana sy Etazonia dia vita ary alefa ara-potoana, nahazo valiny tsara daholo.
Ny fivoaranay dia mihoatra ny 200% miakatra mifanohitra amin'ny tamin'ny taon-dasa, tsy misy olana kalitao mihitsy.
Mihalehibe ny ambaratongantsika, mandray mpiasa sy teknisianina maromaro, manofa atrikasa lehibe iray hafa.
Nividy milina lathe lehibe koa izahay, afaka savaivony hatramin'ny 1200mm ny savaivony, hatramin'ny 6m ny halavany.
Nahasarika ny sain'ny governemanta ihany koa ny zava-bitantsika. Tompon'andraikitra tena tompon'andraikitra ny governemanta Yantai FTZ, mahomby avokoa ny sampana rehetra. Tonga imbetsaka ny departemanta havana mba hampiasa vola amin'ny toe-javatra misy anay, hiezaka hanampy anay handroso bebe kokoa. Mahatsapa tena feno fankasitrahana izahay.
Ny GM Jerry dia nanao fivoriana tamin'ny mpiasa rehetra, nampahafantatra ny toe-draharaha misy ny orinasa, nisaotra ny mpiasa rehetra, nanolotra ny drafitra ho avy ary nanapa-kevitra ny hanome tombony bebe kokoa ho an'ny mpiasa. Nampahafantatra indray ny iraka nampanaovina an'i Stamina i Jerry. Ny tanjaka dia tokony hiasa toy ny orinasa tompon'andraikitra, tompon'andraikitra amin'ny tontolo iainana, tompon'andraikitra amin'ny fiarahamonina, tompon'andraikitra amin'ny mpiasa.
Ankehitriny izahay dia mandefa tany mampiasa vola ary manamboatra atrikasa ho anay manokana.
Manantena Stamina hanana mamiratra kokoa rahampitso!